Xaaladda bani'aadanimo ee dalka Suuriya oo aad looga dayrinayo
Thursday August, 16 2018 - 04:12:10
Sunday February 11, 2018 - 07:48:15 in by salman abdi
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Antonio Guterres ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo rabshadaha ka soo cusboonaaday gudaha dalka Suuriya, gaar ahaanna xiisadda ka dhalatay duqeymihii Israa'iil ay shalay ka geysatay gudaha Suuriya kad
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Antonio Guterres ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo rabshadaha ka soo cusboonaaday gudaha dalka Suuriya, gaar ahaanna xiisadda ka dhalatay duqeymihii Israa'iil ay shalay ka geysatay gudaha Suuriya kaddib markii diyaarad laga soo riday.
Guterres ayaa sheegay in si dhow ay ula socdaan xiisadda ka taagan gudaha Suuriya oo laga yaabo in ay ku fiddo waddamada deriska.
Milatariga israa'iil ayaa sheegay in duqeymaha ay ka geysteen gudaha Suuriya ay ahaayeen kuwii ugu ba'naa muddo ka badan 30 sano.
Dhanka kale, Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ay waajib tahay in la joojiyo wax ay ugu yeertay dagaallada sii kordhaya iyo dhiig ku daadanaya dalka Suuriya.
Toddobaadkii hore waxaa uu ka mid ahaa kii ugu dhiig daadashada badnaa colaadda dalkaasi ee socotay muddada toddobada sano ah.
Zeid Ra'ad Al-Xuseen, oo ah guddoomiyaha golaha xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobey, ayaa sheegay in dad ka badan 270 qof la dilay toddobaadkii hore, kuwaasi oo badankoodu ay ku dhinteen duqeymaha cirka ee ciidammada Ruushka iyo Suuriya.
Haddaba xaaladda bani'aadannimada Suuriya iyo sida ay tahay ayuu Xasan Cali Geele ka wareystay Xuseen Yoonis Xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Qaraamda Midoobey.